जिवनोपन्यास लुनाको लोर्कापण — OnlineDabali
Posted on February 2, 2019 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । लुना जिवनोपन्यासको लोर्कापण गरिएको छ । डा. तुम्ला लाकौल शाहद्वारा लेखित उक्त पुस्तक घोस्ट राईटिङ नेपालले बजारमा ल्याएको हो ।
राजधानीको लेखन कुन्जमा शनिबार बिमोचित सो कृति शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, लेखक डाक्टर तुम्ला लाकौल, मोटिभेशनल स्पीकर एवम प्रिज्म एडभराटाईजिगका सिईओ रन्जित आचार्य, महिला अधिकारवादी डा. ईन्दिरा बस्नेत मनोविज्ञानविद करुणा वन्त, डा. रेभा श्रेष्ठ, अरुणा राज्यलक्ष्मी शाहलगायतले लोर्कापण गरेका हुन् ।
घोष्ट राईटिङ् नेपालले प्रकाशित गरेको पुस्तक जीवनोपन्यास हो । डा. तुम्ला लाकौलको जीवनमाथि गत २ बर्ष अध्ययन गरेर पुस्तक प्रकाशित गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शताब्दी पुरुष जोशीले आफुले बिसं १९९५ सालमा पढेको रुपमतिबाट २०७५ सालामा निक्लेको आफैले विमोचन गरेको लुनासम्म आईपुग्दा उपन्यासमा धेरै विविधता आएपनि लुनामा जीवनवादी दृष्टिकोणले यो उपन्यास अहिलेसम्मकै फरक रहेको बताए ।
मृत्यु र जीवन बीचमा बाचेको जीवनको यो कथा अंग्रेजीमा उल्था गरेर यसलाई विश्वब्यापिकरण गर्न लेखक प्रकाशकलाई जोशीले सुझाव समेत दिए ।
नेपाली समाजमा लुनाले नेपाली महिलालाई बाँच्ने र केही गर्ने कला सिकाउने कार्यक्रमका अर्का अतिथि रन्जित आचार्यले बताए । कार्यक्रममा डा. ईन्दिरा बस्नेतले लुनाको जस्तै जीवन धेरै नेपाली महिलाले भोगेको तर जीवन कथामा नआएकोले सबैलाई यस्ता जीवन लेखेर प्रेरणा दिन सुझाव दिइन् ।
कृतिका लेखक डा. तुम्ला लाकौलले आफ्नो जीवनको असाध्यै जटिल मोडमा भएको बेला लेखिएको यो कृतिले आफुलाई शेलिको कविता याद दिलाएको बताइन् । भयानाक पीडाबाट एक सुन्दर कविता जन्मन्छ भन्ने उक्ति जस्तै यो किताब पनि जीवनको निकै दर्द भएर बाच्न नसक्ने बेलामा लेखेकोले यसले समाजलाई प्रेरणा दियो भने आफुलाई खुशी लाग्ने बताइन् ।
लुनाभित्रबाटै यो अंशः
उर्लंदो भेलजस्तो उसको उमेरको रफ्तारलाई कारागारमा थुनेर उसका रहरलाई विवेक कोर्रा हान्थ्यो । इच्छाहरुको हत्या हुन्थे त्यहाँ । समर्पण र विश्वासमाथि खुलेआम सडकमा गोली चल्थे । तर पनि एउटा नारीको प्रेम क्रूर प्रेमीमा छताछुल्ल भएर बस् पोखिन्थ्यो र चुली भएर प्रेम पोखिन्थ्यो ।
लुना एकदमै आत्तिएकी थिई । ऊ भास्कर र छोराछोरीलाई पटकपटक हेर्दै आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्दै थिई । सौर्यले बिस्तारै आमाको हात च्याप्प समायो । उसले पुलुक्क छोराको अनुहारमा हेरी । पीडाले गलिसकेको थियो उसको पनि अनुहार तर हिम्मतले बोल्यो, “आमा ! हजुरका लागि दिदी र म छौं । हाम्रा लागि अब बुवा भने पनि आमा भने पनि हजुरमात्र हो । हजुर साहसी बन्नुस् । हामी अब ठूला भइसक्यौं । हजुरलाई कहिल्यै दुःख दिँदैनौं । माया गर्छौं । ख्याल राख्छौं हजुरको ।” सौर्य बोल्दै थियो । उसका कुराले लुनाका आँखा निथु्रक्क भिजे । मनिटरमा भास्करको समय घटिरहेको थियो क्रमशः ।
लुनाले मन दह्रो बनाएर भनी, “मलाई थाहा छ । उहाँ जीवनका अन्तिम पलहरु गन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई अब म केही गर्न सक्दिनँ । जे छ अब भगवान्को हातमा छ । अहिले उहाँलाई अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको छ ।” ऊ बोल्दा बोल्दै भावविह्वल भएर लड्न खोजी । छोरा आएर उसलाई सम्हाल्यो र सम्झायो, “आमा म हजुरको साथमा छु । हिम्मत नहार्नुस् । यो जीवनको प्रक्रिया हो । बुवाले जस्तै खुसी दिन सकिनँ भने पनि म हजुरलाई दुःख चाहिँ कहिल्यै दिन्नँ ।” यति भन्दै गर्दा उसका आँखाबाट पनि बरर आँसु झरे ।
जीप दुर्घटना गाडीधनीसहित २ को मृत्यु, २ जना घाइते
निक्षेप नवीकरण गर्दा ब्याज बढी दिन पाउने